Itoobiya oo hawada sare u diri doonto dayax gacmeedkii ugu horeeyey… – Hagaag.com
Itoobiya oo hawada sare u diri doonto dayax gacmeedkii ugu horeeyey…
Posted on 25 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in sanadka 2019 ay markii u horeysay Hawada sare u diri doonto dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee ay yeelato.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Isgaarsiinta dalka Itoobiya dayax gacmeedka hawada loo diri doono ayaa ah mid gabogabo ah, waxaana sameyntiisa iska kaashaday Khubaro ka kala socda Itoobiya iyo Shiinaha.
Dayax gacmeedka ayaa laga diri doonaa dalka Shiinaha, waxaan muddo afar cisho gudahood ku soo gaari doonaa dalka Itoobiya.
Madaxa Machadka Teknoolijiyadda Hawada sare ee Itoobiya Dr. Selemon Belay ayaa sheegay in la dhameystiray fasaxii caalamiga ahaa ee looga baahnaa diiwaan gelinta ceymiska marka dayax gacmeedka hawada sare loo diro.
Dayax-gacmeedka oo miisaankeedu yahay 70 kiilo waxaa loo adeegsan doonaa dabagalka iyo uruurinta xogaha la xiriira beeraha, biyaha, macdinta iyo horumarinta magaalooyinka.
Itoobiya ayaa haddii ay ku guuleysato inay dayax gacmeedka Hawada u dirto waxay noqon doontaa dalkii 7aad ee Afrika ah oo yeesha dayax gacmeed u gaar ah, waxaa horay dayax gacmeed u sameystay dalalka Masar, Koofur Afrika, Nigeria, Ghana, Angola iyo Kenya.